Passenger Traffic Yakakwira 378.4% kuMoscow Sheremetyevo Airport muna Chikumi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Passenger Traffic Yakakwira 378.4% kuMoscow Sheremetyevo Airport muna Chikumi
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Passenger traffic inokwira 378.4% kuMoscow Sheremetyevo Airport muna Chikumi
Iko kusimba kwemafambiro emhepo paSheremetyevo Airport kwave kuri kuwedzera zvakatsiga nekutangazve kwendege dzese pakati peRussia nedzimwe nyika dzinoverengeka, pamwe nekuvhurwa kwenzvimbo nyowani dzevashanyi.
Sheremetyevo mutyairi wevatakuri muna Chikumi yakasvika 2,980,000.
Vafambi vendege dzepasi rese vaisvika 2,499,000, XNUMX XNUMX.
Kutora uye kumhara mashandiro akaona kuwedzera kwe166.9 muzana pamusoro paJune 2020.
Moscow Sheremetyevo International Airport yakashanda vanhu 11,369,000 mumwedzi mitanhatu yekutanga ya2021, kuwedzera kwe16.4% panguva imwecheteyo muna 2020. Vatakuri vemotokari munaJune vakasvika 2,980,000, kuwedzera kwe378.4% panguva inoenderana muna 2020.
Vafambi pendege dzenyika dzakawanda vaisvika 2,499,000, ingangoita 22% yevatakurwi, nepo vafambi vekumba vaisvika 8,870,000, kana 78%. Traffic yevatakuri munaJune yakazara 2,980,000, iyo 654,000 yaive mundege dzekunze uye 2,326,000 vaive mundege dzekumba.
Hwerengedzo ye 99,000 yekubvisa uye kumhara mashandiro akaitwa mune imwecheteyo mwedzi yemwedzi mitanhatu, kusanganisira 22,840 166.9 muna Chikumi, kuwedzera kwe2020 muzana kupfuura Chikumi XNUMX.
Iko kusimba kwemafambiro emhepo paSheremetyevo Airport kwave kuri kuwedzera zvakatsiga nekutangazve kwendege dzese pakati peRussia nedzimwe nyika dzinoverengeka, pamwe nekuvhurwa kwenzvimbo nyowani dzevashanyi uye kurerutswa kwezvirambidzo zvevanhu vanopinda muRussia.
Nzvimbo dzakakurumbira dzenyika dzese muna Ndira-Chikumi wegore razvino dzaive Istanbul, Male, Dubai, Yerevan, Antalya, uye epamba - Sochi, Simferopol, St. Petersburg, Yekaterinburg neKrasnodar.
Aeroflot, Rossiya, Nordwind Airlines, Ikar, Pobeda, Royal Flight uye Severstal vakaita mupiro mukurusa kuna Sheremetyevo mutyairi wevatakuri weSheremetyevo mumwedzi mitanhatu.